३२ वर्षअघि 'भाइरल' भएको पद्मरत्नको त्यो भाषण :: PahiloPost
३२ वर्षअघि 'भाइरल' भएको पद्मरत्नको त्यो भाषण
5th November 2018, 07:35 am | १९ कात्तिक २०७५
काठमाडौं: राजाको हातमा शासन। दलहरुमाथि प्रतिबन्ध। पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि जनप्रतिनिधि चुनिन्थे। काठमाडौँमा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए। २०४३ सालमा भएको चुनावमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए पद्मरत्न तुलाधर। उनका प्रतिस्पर्धी थिए तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ।
के थियो त्यो भाषणमा?
'जनताले राजनीतिमा भाग लिँदैछ। वैशाख २९ गते हुने राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा काठमाडौंका दुई निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १मा चुनाव लडेको छ। उनले भनेका थिए,'म पद्मरत्न तुलाधर चुनाव लड्दै छैन। हामी चुनाव लड्दैछौँ। मेरो व्यक्तिगत इच्छा भएर, व्यक्तिगत लोभ लालच भएर यो चुनावमा भाग लिएको होइन।'
'अहिले हामी जनताको पक्षमा ठूलाठूला संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति लिएर यो चुनावमा भाग लिने नीति लिएको छु,' उनले भाषणमा भनेका थिए।
'जनताको यो अभियानमा भाग लिनुस् भन्न म उभिएको हुँ।अरुबेला जनताका शत्रुहरुलाई सजाय दिन नसके पनि पाँच वर्षसम्म भ्रष्टाचार गरेर करोडपति बन्नेहरुलाई, जनताका दुस्मनहरुलाई यो चुनावमा उनीहरुलाई हराएर सजाय दिन त सक्छौँ। जनता ती भ्रष्टाचारीहरुलाई सजाय दिन तत्पर छन्। त्यसैले उनीहरुको साथसाथै मैले चुनावमा भाग लिएको छु,' उनले भनेका थिए।
उनले त्यतिवेला भाषणका क्रममा एउटा गाउँले बूढाले सुनाएको विचार भनेका थिए। 'हेर केटाहरु हो, यो गाउँमा तिमीहरु ९५ जना गरिबका छोराहरु छौ। पाँच जनामात्र उनीहरु छन्। तिमीहरु ९५ जना उठेको खण्डमा तिमीहरुले चाहेको बेला ती पाँच जनालाई सजाय दिन सक्छौ। जबसम्म तिमीहरु ९५ जना गरिबका छोराहरु उठ्दैनौँ, यहाँ विकास हुने छैन। जबसम्म तिमीहरु ९५ जना गरिबका छोराहरु एकजुट हुने छैनौँ, तबसम्म उनीहरु पाँचजनाले तिमीहरुमाथि अन्याय गरिरहने छन्।'
'नेपालमा पनि ९५ प्रतिशत जनता गरिब छन्। पीडित छन्। शोषित छन्। पाँच प्रतिशत मात्रै यहाँ भ्रष्टाचारी छन्। तस्करी गर्दछन्। शासन गर्दछन्। शोषण गर्दछन्। त्यसकारण हामी गरिबका छोराछोरी, ९५ प्रतिशत हामी जनता उठ्यौँ भने यहाँका पाँच प्रतिशत शोषक, सामन्त, भ्रष्टाचारहरुलाई हामी सजाय दिन सक्छौँ। हामी जनता उठेको खण्डमा मात्रै हामीले हाम्रो देशलाई माथि उठाउन सक्छौँ। हामीले जनतालाई मुक्ति दिलाउन सक्ने छौँ।'
'जनताले राजनीतिमा भाग लिनुको अर्थ खाली कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुनु मात्र होइन जनताले राजनीतिमा भाग लिनुको अर्थ खाली जुलुस निकाल्नु मात्र होइन, झण्डा बोक्नु र नारा फलाक्नु मात्र होइन जनताले राजनीतिमा भाग लिनु भनेको आफ्नो देशको अवस्थाबारे छलफल गर्नु हो। जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्नु हो। हाम्रो देशमा विकास भइरहेको छैन भने किन विकास भइरहेको छैन त्यसबारे जान्नु हो। पाँच प्रतिशतले हामीमाथि शोषण गरिरहेको छ, दमन गरिरहेको छ त्यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने छलफल गर्ने हो।'
'अहिले पनि हामी नेपाली जनता चुप लागेर बस्यौँ। राजनीतिसँग मतलव छैन भनेर बस्यौँ। हामी बेवास्ता गरेर बस्यौँ, कि पञ्चहरुले भ्रष्टाचार गरेर बसोस्, मूर्ति चोरेर बसोस, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुले लाखौँ करोडौँको तस्करी गरे गरोस् भनेर हामी चुप लागेर बस्यौँ भने फेरि पनि उनीहरुले हामीमाथि अन्याय गर्ने छन्। फेरि पनि हाम्रो देशमा यिनीहरुले ठूल्ठूला दुर्दशा ल्याउने छन्। हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने छन्। त्यसकारण अब हामी चुप लागेर बस्नु भएन। अब हामी पनि उठ्नु पर्‍यो। त्यसकारण जनताले राजनीतिमा भाग लिनुपर्‍यो।'
उनले निर्वाचन अगावै आफूले चुनाव जितिसकेको घोषणासमेत गरेका थिए। उनले 'चुनावमा उठ्नुको अर्थ जनतालाई जागृत गर्न हो। जनतामा सचेतता ल्याउन हो।जनतालाई उठाउनु हो। जनता जबसम्म उठ्दैनन्। तबसम्म देशको दुर्गति हुँदै जाने छ। त्यसकारण जनता उठ्नुपर्‍यो,' भनेका थिए।
पञ्चायती व्यवस्था प्रति उनको व्यंग्य हुन्थ्यो। 'हुन त यो पञ्चायती व्यवस्था भनिएको छ। तर हामी कतै पनि व्यवस्था देख्दैनौँ। जता हेर्‍यो अव्यवस्थै अव्यवस्था छ। सरकारी कार्यालय गए पनि अव्यवस्था छ। अदालत गए पनि अव्यवस्था छ। हामी साधारण जनतालाई कानुनको सामान्य मात्र उल्लंघन गर्दा पनि हामीलाई कठोर सजाय दिइन्छ। जेलको यातना दिइन्छ। तर यो सरकारले आफैंले बनाएको कानुनको उल्लंघन गर्दाखेरी यसलाई कसले सजाय दिने? मलाई लाग्दछ यसलाई सजाय दिने एउटै मात्र शक्ति यहाँ बाँकी छ। त्यो शक्ति हो जनताको शक्ति।'
'म एक्लैले मुक्का हान्दैमा यो यथास्थिति तोडिने छैन। त्यसैले तपाईँहरु सबै मिलेर मुक्का हानिदिनुस्। म यही आह्वान गर्न चुनावमा उठेको हुँ। म चुनाव जितेको खण्डमा त्यहाँबाट आउने चार हजार-पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता लिने छैन। मैले यो भन्नुको अर्थ म धनीको छोरो भएर होइन। म पनि मध्यम वर्गको छोरो हुँ। मेरो पनि आर्थिक समस्या छ। मैले यो भन्नुको कारण हो जनतामा यो सिद्ध गर्न अझ पनि नेपालमा यस्ता सपुतहरु बाँकी छन्। यस्ता छोराहरु बाँकी छन्। मेरो केही व्यक्तिगत स्वार्थ छैन यो चुनाव लड्नुमा,' उनले भाषणमा भनेका थिए।
भ्रष्टाचारको विषयमा उनले त्यो भाषणमा भनेका थिए, 'यहाँ विश्वासको ठूलो संकट छ। जनताले कसैले कसैलाई पत्याइरहेको छैन। किन भन्दा खेरी पाँच वर्षसम्म यसअघि निर्वाचित भएकाले जनताको विकासका लागि एक पैसा पनि गाउँमा पठाइदिएनन्। करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर सिद्धाइदिए। यो संकटलाई पार गर्नका लागि म इमान्दारिताका साथ प्रण गरेको छु। म एक पैसा भत्ता लिने छैन। म एक पैसा भ्रष्टाचार गर्ने छैन।'
'मेरा विरुद्ध पञ्चेहरु गाउँ गाउँमा गएर यो पद्मरत्न भन्ने साम्प्रदायिक मान्छे हो। यसलाई हराउनुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् रे। यदि म साम्प्रदायिक हो भने तपाईँहरुले हराउनुपर्छ। तपाईँहरुले कठोर सजाय दिनुपर्छ। होइन भने ती साम्प्रदायिक तत्वहरुले यहाँ साम्प्रादायिक भावना फैलाउन खोज्छ भने तिनीहरुलाई चुनेर सजाय दिनुपर्छ।'
'यहाँ जनताका शत्रुहरु विभिन्न ठाउँमा छन्। विभिन्न क्षेत्रमा छन्। पत्रकारिता जगतमा पनि छन्। केही पत्रकारहरुले पनि साम्प्रदायिक भनेका छन्। म कुन अर्थमा साम्प्रदायिक हो? त्यसको प्रमाण देओस्। साहस भए, तागत भए। हामी कुनै पनि अर्थमा साम्प्रदायिक होइनौँ।'
'हामी नेपाली भाषाको सम्मान गर्छौँ। नेपाली भाषाको विरोध गर्दैनौँ। तामाङ र गुरुङहरुका बीच कुरा हुँदा नेपाली भाषामा कुरा हुन्छ। मलाई थाहा छ। नेवार र तामाङबीच कुरा हुँदा हामीले नेपाली भाषा बोलेका छौँ। हामी कुनै पनि अर्थमा साम्प्रदायिक होइनौँ।'
'एउटा उदाहरण दिउँ, रेडियो नेपालमा विज्ञापन सेवा भनेर घण्टौँका घण्टौँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। त्यो विज्ञापन कार्यक्रममा नेपाली भाषा बाहेक हिन्दी भाषामा विज्ञापन बज्छ।'
'मलाई थाहा छ होण्डाको विज्ञापन जापानी भाषामा विज्ञापन लिएको मलाई थाहा छ। बंगाली भाषामा विज्ञापन लिएको थियो, मराठी भाषामा विज्ञापन लिएको थियो। संसारको कुनै पनि भाषामा विज्ञापन लिन हुने हाम्रो नेपाल भाषाको विज्ञापन किन लिनु हुँदैन?'
'तपाईँलाई थाहा छ रेडियो नेपालले घण्टौँका घण्टौँ अंग्रेजी गीत बजाएको छ। त्यो गीत कसले बुझेको छ? मैले एमएसम्म अंग्रेजी पढेको छु। मैले त बुझेको छैन भने को नेपालीले बुझेको छ? त्यो अंग्रेजीको गीतको कार्यक्रम कसको लागि? तर तामाङ भाषाका दुईवटा गीत बजाउँदैन। गुरुङ भाषाका दुईवटा गीत बजाउँदैनन्। मैथिली भाषाबाट दुईवटा गीत बजाउँदैनन् भने साम्प्रादायिक को हो? म भन्दछु साम्प्रदायिक रेडियो नेपाल हो। साम्प्रादायिक श्री ५ को सरकार हो। त्यसकारण हामी नेपाली जनता साम्प्रादायिक होइनौँ। नेपाली जनताका शत्रुहरु साम्प्रादायिक हुन्।
'यहाँ चुनावमा पद्मरत्नको विरुद्धमा कसैले साम्प्रदायिक नारा लगाउँछ भने त्यो देशद्रोही हो। आज यो पञ्चायत व्यवस्थाले भनोस्, सरकारले भनोस् कि पद्मरत्न साम्प्रादायिक हो कि होइन, पत्रकारहरु बोलोस् पद्मरत्न साम्प्रादायिक हो कि होइन? होइन भने साम्प्रादायिक भावना फैलाउन खोज्नेहरु देशका दुस्मन हुन। उनीहरुलाई निर्मूल पार्नुछ। म पद्मरत्न ती तत्वलाई निर्मूल पार्न चुनाव उठ्दै छु।
भाषणको अडियो सुन्नुस्-
३२ वर्षअघि 'भाइरल' भएको पद्मरत्नको त्यो भाषण को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
RS [ 2018-11-05 10:10:02 ]
त्यति वेला काठमाण्डुमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र होईन । चुनावमा वढी मत ल्याउने पहिलो र दोस्रो दुईजनाले चुनाव जित्ने हो ।